DF oo sheegtay in ay dib u habeyn ku sameyneyso Dekedda Muqdisho | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA DF oo sheegtay in ay dib u habeyn ku sameyneyso Dekedda Muqdisho
DF oo sheegtay in ay dib u habeyn ku sameyneyso Dekedda Muqdisho
Maryan Aweys Jaamac Wasiirka Dakaddaha iyo Gaadiidka Badda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inuu socdo qorshe ku aadan sidii loo balaarin lahaa Dakadda magaalada Muqdisho, oo hada howlaheeda ay ku socdaan si dar dar leh.
Waxay sheegtay Wasiir Maryan in ay rajeynayaan dib u dayactirka lagu sameynayo Dekada Muqdisho in si guul leh uu ku soo dhamaado, maadaama Dekada ay tahay mid mar hore ah, loona baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo.
Wasiirka Dakaddaha iyo Gaadiidka Badda Soomaaliya ayaa sheegtay howshan in ay gacan ka siin doonaan Shirkada Turkiga ee ka howlgasha gudaha Dekada iyo Bankiga Aduunka, Dowladda Federaalkana ay arrintaasi uga mahadcelineyso.
“Dhinaca marsooyinka oo Maraakiibta ku soo xirtaan in la ballaariyo oo balaca Dakadda la weyneeyo, Dakadeeda waa mid waqti hore ah oo dhibaatooyin kala duwan ay soo mareen oo dayactir badan aanan helin, Bankiga aduunka ayaa naga taakuleynaya, dhamaadka sanadkaan ayaana laga hawlgalaya.” Waxaa sidaasi tiri Wasiir Maryan.
Maryan Aweys Jaamac Wasiirka Dakaddaha iyo Gaadiidka Badda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay Wasaaradda in ay ka shaqeyneyso qaaabkii loo mideyn lahaa Dekedaha Soomaaliyeed, maadaama wadanka uu u kala baxay Federaal.
Wasiir Maryan ayaa mar kale tiri “Wasaaradda waxa ay ka shaqeynaysaa sidii loo mideyn lahaa Dakaddaha Somaliyed, dalka Federal ayuu u kala baxay, weli ma saleysna qaabkii canshuuraha iyo dakaddaha la isugu xiri lahaa, marka hadda Wasaarada waxa ay diyaarinaysaa siyaasadii la isugu xiri lahaa dhamaan Dakaddaha dalka ku yaal.”